Intombazana engabonakaliyo: ubunyani begazi lolutsha oluninzi namhlanje | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Iincwadi zoLutsha, Inoveli emnyama
Ibinzana leBlue Jeans
Intombazana engabonakaliyo yinoveli ngumbhali woluncwadi wothando wolutsha uFrancisco de Paula Fernández González, owaziwa ngokuba yiBlue Jeans. Umsebenzi wapapashwa ngo-Epreli 05, 2018, kunye nawo umbhali wazama ukungena kuhlobo olo Thriller Kwaye ndaqala i-trilogy engaziwayo kwincwadi yokuqala. Kweli cebo lenkundla yamapolisa, intombazana ekwishumi elivisayo ibulawa kwisikolo sayo, indawo egcwele iimfihlakalo kunye nabarhanelwa.
IBlue Jeans ivelise ibali apho abantu abancinci babengabadlali abaphambili, bebonisa ngokucacileyo ubunzima abajamelana nabo nendlela abaqhele ukujongana ngayo nabo. Yayo, ichukumisa imiba yenkxalabo, enje: ukuxhatshazwa, imidiya yoluntu, iindaba ezingezizo, kunye nokukhetha ngokwesondo. Iinjongo zombhali kukubonakalisa iinyani olujamelana nazo ulutsha ngoku.
1 Isishwankathelo Intombazana engabonakaliyo
1.1 Yonke into iqala
1.2 Ukudibana okungalindelekanga
1.3 Iimviwo zokugqibela
1.4 Umnxeba onomdla
1.5 Ukoyikisa okufumanekayo
2 Uhlalutyo Intombazana engabonakaliyo
2.2.1 IAurora Rios
2.2.2 UJulia Plaza
3.1 IBlue Jeans isebenza
Isishwankathelo Intombazana engabonakaliyo
Yonke into iqala
NgoLwesihlanu, nge-19 kaMeyi 2017, abancinci Aurora Ukhangela iimpahla zakhe ezigugileyo ngengubo yokuphuma. Phelekezela ukuhlola kwakhe ngengoma ayithandayo: "Inqaba kwinduli" nguEd Sheeran. Ngaloo nto zama ukungayihoyi inyani kwi ohlala nonina, Vera. Bobabini babenexesha elinzima emva koyise -Bernard- ndiya kubashiya kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Yayibubusuku obushushu Aurora ekugqibeleni ufumana into yokunxiba, azithambise, kwaye eme ajonge iwotshi yakhe: ibiyintsimbi yesibhozo. Ngaphambi kokuba uhambe, fumana umyalezo kuWhatsApp: "Uyeza ngoku? Andizokwazi ukuhlala ixesha elide. Kude kube yintsimbi yethoba ngoku. Khawulezisa". Kungekudala, Uthatha izinto zakhe aye kwindawo ebekiweyo: Iziko laseRubén Darío, elalikufutshane nekona.
Intombazana engabonakaliyo: ...
Ukufika kwabo esikolweni - esasivulelwe iiklasi zangokuhlwa—, Aurora Uyakwazi ukungena ngaphandle kokujongwa. Uya kwigumbi elitshixwayo kodwa uyema xa efika ebaleni lezemidlalo, kuba umfana wayeziqhelanisa nebhasikithi. Ukuze angabonakali, uthatha isigqibo sokuhlala apho de indawo icace. Okwangoku, uthumela u-WhatsApp kuye nabani na olindileyo ukuba achaze okwenzekileyo, kodwa akafumani mpendulo.
Kwimizuzu nje engephi, lo mfana uyemka Aurora khawuleza uhambe uye kwindawo oya kuyo. Xa engena kwigumbi lokunxiba akafumani mntu, cinga ukuba mhlawumbi umhla wakho unento engalindelekanga. Ngokukhawuleza, bavula ucango, eli bhinqa liselula lijika ngokukhawuleza, kodwa imvakalelo yalo yaphela xa ibona ukuba ngubani na ofikileyo. Umfazi omncinci - othukile-uyakhubeka kwaye uwa, kwangaxeshanye esiva la mazwi: "Molo, andinguye na lo mntu ubumlindele?"
Kwangobo busuku, uJulia Umntu ofunda noAurora— ufundela iimviwo zakhe zokugqibela kunye no-Emilio, oku ngefowuni yevidiyo kwi-Skype. Bobabini bangabahlobo abasenyongweni okoko wafuduka-ekhuthazwa ngumsebenzi katata wakhe- kwidolophu encinci kwiminyaka emi-3 eyadlulayo. Emva kokuvuma ukudibana ngosuku olulandelayo kwisidlo sakusasa kwaye baqhubeke nezifundo zabo, bavalelisa kwaye baphelise umnxeba.
Julia Uhla esidlweni sangokuhlwa, umama wakhe-uAitana-wayethe i-pizza. Utata wosapho uMiguel Ángel ubabalisela ngengozi. Ngelo xesha, ibhinqa eliselula ifumana umnxeba ayaziwa; yiya kwaye ujika abe Vera, Ngubani obuzayo ewe intombi yakho UAurora ukunye naye.
UJulia uyamangaliswa, kuba ayizalani neqabane lakhe elililolo Yena noEmilio bade bayihlele njengentombazana engabonakaliyo.
Ngeeyure zakwangomgqibelo UVera uxele intombi yakhe ukuba ilahlekile kwaye kwangoko ityala labelwa uSajini Miguel Ángel, utata kaJulia. Ngentsasa elandelayo, umzimba ka-Aurora ongenabomi wafunyanwa kweli ziko, ngefuthe elinamandla entloko kunye nekhampasi ecaleni lakhe. Esi sehlo sibi sothuse wonke umntu, esikolweni nasezidolophini.
UJulia wayecaphuka kakhulu zezi ndaba, kwangoko waxelela uEmilio ukuba kufuneka babuze malunga nokwenzekileyo. Ungumfazi osemncinci oqondayo kwaye unelungelo lokuba nolwazi lokuqala-ntloko oluvela kuyise nakunina-ngubani umphathi we-coroner. Wonke umntu kwiziko uza kudliwanondlebe, ngolu hlobo, kancinci kancinci kwaye ngelixa uphanda umbulali wase-Aurora, iimfihlo ezimangalisayo nezimnyama zityhilwa.
Uhlalutyo Intombazana engabonakaliyo
Intombazana engabonakaliyo yenzeka kwi Amaphepha ayi-544 yahlulwe ngu intshayelelo, izahluko ezingama-72 kunye noluhlu. Icandelo ngalinye lifutshane, ngolwimi olulula kunye neengxoxo ezifutshane ezenza ukufunda ngokutyibilikayo kwaye kumnandi. Imbali yile ibaliswa ngumntu wesithathu Kwaye iyelenqe liyaqhubeka phakathi kwe- yangoku kunye nexesha elidlulileyo, ngakumbi ngobomi beAurora.
Ungumfazi osemncinci Iminyaka engama-17 ofunda kwisikolo samabanga aphakamileyo kunye Uye wazimela wedwa kwaye wazisa ukusukela ngala mhla wemka nguyise. Ubuntu bakhe bumthintele ekubeni nabahlobo, ukongeza, ube lixhoba lokwaliwa kunye nokugculelwa amatyeli aliqela. Yena ubulawa ngendlela engaqondakaliyo kwisikolo awayekuso kunyaka wakhe wokuqala kwisikolo samabanga aphakamileyo.
Ungumlinganiswa ophambili ebalini, intombazana encinci Yobukrelekrele obumangalisayo nge-IQ ephezulu kunye nenkumbulo engakholelekiyo. Ungumntu othanda iinoveli eziyimfihlakalo, ngakumbi ezo zika-Agatha Christie; Uthanda ukudlala i-chess kwaye unqula uMagnus Carlsen. Njengoko uzama ukusombulula ukubulawa kwe-Aurora, uya kujongana neyona puzzle inzima ebomini bakho bonke.
Uyinkwenkwe engaqhelekanga, ukhuselekile kuye ubuntu bokuhlala. Nangona kunjalo, kunjalo eyahlukileyo ngokupheleleyo xa ekunye noJulia; are abahlobo abasenyongweni kunye nabafihliweyo. Nangona ekuqaleni wayenomdla ngendlela yakhe, ubudlelwane babo babunobuhlobo kuphela. U-Emilio uhamba noJulia kuphando malunga nokufa okungaqhelekanga kwe-Aurora, evusa ithuku lakhe lobuntatheli.
Kulo Thriller Kuya kubakho abalinganiswa abohlukeneyo, kubandakanya ootitshala, abafundi kunye nabantu belali. Phakathi kwabo UMichelangelo ugqamile -usayitsheni wamapolisa Kwezobulungisa bendawo- kunye I-Aitana - inkundla-, bobabini abaphethe ityala lika-Aurora.
UFrancisco de Paula Fernández González wazalelwa eSeville ngomhla we-7 kuNovemba ngo-1978. Wahlala ebusheni bakhe eCarmona, apho wayefunda kwisikolo saseSalesianos nakwisikolo samabanga aphakamileyo iMaese Rodrigo. Waqala idyunivesithi ngesidanga somthetho, kodwa kwiinyanga ezimbalwa wayesazi ukuba yayingelo bizo lwakhe. Wayethatha umhlala-phantsi, waya eMadrid kwaye waphumelela njengentatheli kwiYunivesithi yaseYurophu, kwaye enegunya kwezemidlalo.
Kwizihlandlo ezininzi ebesebenzisana kwimithombo yeendaba ezahlukeneyo nomsebenzi wakhe njengentatheli yezemidlalo. Wayekwangumqeqeshi wabantwana kumaqela e-futsal ePalestra Atenea Sports Club. Emva kwala mava, Ugqibe ekubeni azinikezele ekubhaleni, egxile ekudalweni kweenoveli kuhlobo lolutsha, ezibandakanya ezothando kunye neetekhnoloji zangoku.
2009, umbhali waseSpain esidlangalaleni Iingoma zikaPaula, ingxelo yakhe yokuqala, ethi isayinwe njenge Iijini ezibhlu -Isimbumbulu esaziwa ngayo namhlanje. Inqaku lakhe lokuqala laqala i-trilogy yolutsha efanayo. Impumelelo yezi mpapasho yathatha umsebenzi wakhe. Ukusukela ngoko ubhale uthotho olongezelelekileyo ezintathu kunye nenoveli yakhe yokugqibela ezimeleyo, The istriller: Inkampu (2021).
IBlue Jeans isebenza
series Iingoma zikaPaula:
Iingoma zikaPaula (2009)
Uyazi ukuba ndiyakuthanda? (2009)
Ndithule nge kiss (2011)
series Iklabhu yokungaqondi kakuhle:
Molo nkosazana! (2012)
Musa ukuncuma ukuba ndiyathandana (2013)
Ndingaphupha nawe? (2014)
Ndinemfihlo: idayari kaMeri (2014)
series Into elula kakhulu:
Into elula njengokuthumela nge-tweet ndiyakuthanda (2015)
Into elula njengokukuphuza (2016)
Into elula njengokuhlala nawe (2017)
series Intombazana engabonakaliyo:
Intombazana engabonakaliyo (2018)
Iphazili yekristale (2019)
Isithembiso sikaJulia (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Intombazana engabonakaliyo
URafa Melero. Udliwanondlebe nombhali weSiphumo sokuBambisana